पारसले छोरा हृदयेन्द्रको भिडियो सेयर गर्दै लेखे यस्तो, छोरा पनि बाबुको आर्शिवाद लिन पुगे ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 31, 2021 AdminLeaveaComment on पारसले छोरा हृदयेन्द्रको भिडियो सेयर गर्दै लेखे यस्तो, छोरा पनि बाबुको आर्शिवाद लिन पुगे ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
नेपालको तत्कालीन राज संस्थाका एक उत्तराधिकारी हृदयेन्द्र शाह थाइल्याण्ड हाइस्कूल ग्राजुएट भएका छन् । उनी बैंककमा बसेर आफ्ना दिदीहरुसँग पढाई गरिरहेका छन् । उनी फेसबुक ट्वीटर चलाउँदैनन् तर इन्टामा उनका तस्वीर र भिडियो क्लिप वेला बेलामा हेर्न पाइन्छ । उनी ग्राजुएट भएपछि उनको तस्वीर र भिडियो उनका बाबु पारश शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् ।
हृदयेन्द्र पनि आफ्ना बाबुको आर्शिवाद लिन पुगेका छन् । आर्शिवाद लिइरहेको तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक भएको छ । हालसालै उनको एक भिडियो क्लिप भाइरल भै रहेको छ । उक्त क्लिप उनका दिदीहरु र आमा हिमानी शाहको एकाउण्टबाट सेयर भएको थियो । त्यसपछि उक्त क्लिपलाई लाखौं पटक हेरिएको थियो ।
हृदयेन्द्र उक्त क्लिपमा जीवन सफल बनाउने सात शुत्रका बारेमा कुरा गर्दैछन् । उनी उक्त क्लिपमा भन्छन्, आज म कसैले मलाई भनेका जीवनका सात रहस्यका बारेमा बताउँदैछु र मलाई आशा छ यो कुराले तपाईको जीवनमा पनि केही सहयोग पुग्नेछ । ती रहस्यहरु हिजो सम्झेर पश्चताप नगर्ने, समयको ख्याल गर्ने, तुलना नगर्ने, शान्त रहने, मुस्कुराउन सिक्ने जस्ता कुराहरु उनले बताएका छन् ।